Full Guide on Mirroring Your Android in aad PC / Mac | Mirror Android
1. Maxay Dadku waxay rabaan inay muraayad ay Android inay PC?
2. Siyaabaha aad isku Mirror Android karaa in PC
3. Qalabka Best ku saabsan sida ay qortay Daily Mirror Your Android in aad PC
4.Guide ku saabsan sida ay qortay Daily Mirror Your Android Phone in MAC
1.Why Dadku waxay rabaan inay muraayad ay Android inay PC?
Waxa ugu fiican ee ku saabsan telefoonada Android maalmahan waa in ay la mid yihiin kombiyuutarada mini oo aad ku badbaadin karto waxyaabo badan sida sawiro, videos, music iyo xitaa waraaqaha muhiimka ah aad. Qaadashada telefoonka ah waa mid aad u sahlan, sidoo, oo aad leedahay dunida oo dhan ugu ururi qalab hal. Laakiin waxaa jira waqtiyo aad u baahan tahay si ay u muujiyaan wax muhiim ah in aad dadka kale ee aad taleefan oo aad u baahan tahay si ay u xidhmi doontaa PC, gaar ahaan haddii ay tahay macluumaad muhiim ah kuwaas oo aad u soo ururiyey internet-ka, oo ay doonayaan in ay muujiyaan qoyskaaga ama asxaabtaada. Xaaladaha sidan oo kale mirroring aad Android inay PC noqdo muhiim ma aha sida leedahay inaad u soo dirto ama u soo dir xogta qof kasta.
Waxaa jira siyaabo badan oo aad kaas oo muraayad karaa Android inay PC-ada kala duwan iyo sidoo kale waxaa laga heli karaa ujeedadaas. Waxaad buugii karaa Android ay u PC adigoo isticmaalaya midkood WiFi ama aad dekedda USB. Labada hababka yihiin wax ku ool ah oo lagu guulaystay.
2.1 Mirror Android inay PC la WiFi
2.1.1 MirrorOp Qofka dirayo
Qofka dirayo MirrorOp waa qalab ah oo aad si fudud u isticmaali kartaa mirroring aad Android aad PC by adiga oo isticmaaleya isticmaale WiFi.
App Tani lagala soo bixi karaa Playstore Google maraya link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.awindinc.sphone2tv&hl=en
Sidee ma MirrorOp Work:
MirrorOp waxaa laga heli karaa PlayStore iyo si fudud loo soo bixi karaa. Ka hor inta mirroring aad Android la PC, hubi in aad Android habaysan.
Download Qofka dirayo MirrorOp in aad Android.
Download version daaqadaha ee app ee loo yaqaan MirrorOp aqbalana aad kombuutarka
Connect ee Android iyo PC shabakad WiFi caadi ah.
Orod Qofka dirayo app MirrorOp ee aad kombuutarka.
Baxsad app MirrorOp aqbalana aad Android.
Labada hindiseen midba midka kale ku baadhi doonaa si toos ah.
Hadda waxaad bilaabi kartaa mirroring.
 Waxaad xakamayn kartaa qalab Android aad dhex keyboard iyo mouse.
Miracast waa codsi ah kaasoo loo isticmaalo mirroring Android la PC via xiriir WiFi ah.
: Waxaad Miracast ka soo dejisan kartaa https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wikimediacom.wifidisplayhelper&hl=en
Sidee ma Miracast Work
Ka dib markii ay ku rakibidda Miracast ka link kor ku xusan oo ku saabsan weerar dadban ku qalab Android ka xaq u dooro ikhtiyaarka Devices.
Dooro qaab Project ikhtiyaarka ugu jiraan.
An "Add bandhigay wireless" doorasho ka muuqan doontaa qalab oo aad ka dooran kartaa xidhiidh WiFi aad.
Laga soo bilaabo aad PC, waxaad tagi kartaa Settings iyo guji tab Devices. By gujinaya ah "Add qalab" doorasho, waxaad ka raadin kartaa aqbalana Miracast ah.
Laga soo bilaabo qalab aad, u tag Settings oo halkaas ka qaybta Device iyo garaac Display. Dooro Kabka Screen halkaas ka.
Dooro badhanka Menu iyo qasabadda ku sahlo Wireless Display. Qalab aad hadda raadin doona qalabka Miracast oo muujiyaan xulashada Kabka Screen. Tubada ku saabsan doorasho iyo ogeysiis ah in aad shaashadda la dhiibtay muuqan doonaa.
Hadda, waxaad si fudud u buugii kartaa Android aad PC.
2.2 Mirror Android inay PC la USB
Monitor 2.2.1 Android-Screen
Wixii mirroring Android inay PC via USB ah, waa muhiim in aad heshay Java lagu rakibay aad kombuutarka. Dhanka kale, hab Developer waa in karti loo qalabka Android aad u mirroring guul qalabka.
Marka shuruudaha yihiin dhamaystiran, waxaad ka bixi kartaa Monitor Android-Screen https://code.google.com/p/android-screen-monitor/
Download iyo rakibi JRE ama Java Runtime Environment.
Ku rakib Android Software Development Kit (SDK) iyo qalabka la xiriira in aad PC ee Barnaamijka Folder.
Marka waxa la rakibo orod codsiga dooro oo keliya Android SDK-Platform Tools.
Tag Settings ee aad telefoon ama qalabka Android, dooro Developer Options oo halkaas ka soo gudbo si Debugging doorasho USB iyo awood.
Raadi darawallada la xiriira kula qalab Android ee Google iyo download it galay gal gaar ah ee aad PC.
Hadda si aad u computer aad ku xidhan karto qalab aad dhex USB ah
Fur Manager Device iyo raadiyo qalab Android aad.
Hadda, waxaa la gaarey waqtigii dhigay jidka ah ADB.
Wuxuu furaa Guryaha of your computer iyo guji Advance Settings System ikhtiyaarka. Dooro Doorsoomayaasha deegaanka oo ka raadi "Jidka".
Marka laga helay, guji oo badbaadiyo waa edit in C: \_ Program Files (x86) \_ Android \_ android-sdk \_ madal-qalabka \_
Hadda, download Monitor Screen Android oo ku xidh on your computer.
Hadda, your computer waxaa Seme aad android.
2.2.2 Droid @ Screen
Droid @ Screen waa codsi kale oo caan ah oo loo isticmaalo Mirror Android inay PC iyada oo USB ah.
Waxaad app ka http://droid-at-screen.ribomation.com/?download=127071 soo bixi kartaa : Download
Wixii la isticmaalayo app this, in aad marka hore u baahan tahay inaad kala soo baxdo Java Run Waqtiga Codsiga aad kombuutarka oo soo dajiyo waa.
Hadda, download qalab ADB oo ay u soo saarida in aad desktop.
Download Droid @ Screen ka link la siiyay oo ay maamulaan codsiga. Hadda, guji ADB oo dooro Jidka ADB eedeysanuhu. Dooro folder ADB ay ku lahayd in aad ka soo saaro in ay ka hor iyo riix OK.
In qalab Android aad, furo Settings, oo taga si Options Developer ah.
Leexo Options Developer ku dooro hab Debugging USB way ka hoosaysaa.
Connect qalab aad si aad PC ka dib markii rakibidda dhamaan darawallada loo baahan yahay internet ka.
Qalab aad ayaa Seme in aad PC.
Inkasta oo ay jiraan qalab badan oo kala duwan laga heli karaa internet-ka oo kaa caawinaya in aad ku mirroring qalab Android aad la leedahay PC, weli haddii aad raadinayso ugu fiican, waxa ay hubaal waa MirrorGo. App Tani lagala soo bixi karaa http://MirrorGo.wondershare.com/ iyo xal aad u fudud oo xirfadle ah inuu dhibaato mirroring oo dhan. MirrorGo ka shaqeeya Windows 7, Windows 8, Windows Vista iyo sidoo kale on Windows XP. Waxaa sidoo kale la jaan qaada macruufka iyo sidoo kale Android. MirrorGo oggolaanaysa in aad maamulato content oo dhan qalabka Android aad, in ay tahay music, fariimaha qoraalka ah, sawirada, cajaladaha ama codsi kasta oo kale. Waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa content kala duwan iyadoo la isticmaalayo app this.
3.1 Sida aad u xiriiriyaan Device la PC Isticmaalka MirrorGo:
Daar aad WiFi iyo in la hubiyo in aad qalab iyo PC ku xiran yihiin xiriir la mid ah.
Ku rakib faylka MirrorGo APK qalabka Android aad.
Isla, ordo MirrorGo Wondershare ku saabsan nidaamka.
Orod app MirrorGo ku qalab aad iyo lambarka sirta QR-doorataa OK.
Marka mobile loo xiri doona aad PC, qalab Android aad ka dhex muuqan doonaa suuqa kala hoose.
3.2 Sida loo xidhi aad Device la PC Isticmaalka USB A:
Tag ka Settings qalab Android iyo awood doorasho ee Debug USB.
Dooro hubiyaan adeeg MTP ku qalab aad.
Ku rakib Wodnershare MirrorGo aad kombuutarka.
Connect qalab aad la leedahay PC iyada oo USB ah. Your PC toos ah lagu ogaan doonaa qalab aad sababtoo ah app ku rakiban.
3.3 Waxyaabaha aad samayn kartid ee aad PC in Koontorool Mobile
Marka aad Seme qalab Android aad la leedahay PC, waxaad samayn kartaa waxyaabo badan oo xiiso leh sida:
Daawo jecel videos aad shaashadda weyn.
U muuji sawirro aad jeceshahay in aad qoyska iyo saaxiibada.
Waxaad ku raaxaysan karaan waayo-aragnimo ah daawashada fiican sababta oo ah baaxadda screen weyn.
Waxaad si fudud wareejin karaan macluumaadka u dhexeeya aad PC iyo qalab Android.
Waxaad dhigi karo kulamada ku hadalka taleefanka gacanta iyada oo aad PC.
Waxaad isticmaali kartaa Softwares dhabta ah markii ay ku rakiban ku hadalka taleefanka gacanta iyada oo aad PC.
4. Guide ku saabsan sida loo Mirror Your Android Phone in MAC
Sidaas aadan leedahay PC ah laakiin waa milkiilaha kibirsan ee MAC ah. Waa hagaag, ma jirto wax laga walwalo sidii aad si fudud in aad MAC buugii kartaa qalab Android aad sidoo kale. Sida mirroring aad PC iyo qalab la samayn karaa iyada oo la isticmaalayo ee Softwares heli karo kala duwan, mirroring qalab si MAC ka kooban yahay fursado badan oo kala duwan iyo sidoo kale. ka dib markii mirroring, aad ku raaxaysan karaan waayo-aragnimo xiiso leh oo kala duwan sida adiga oo isticmaaleya isticmaale Watsapp shaashad weyn iyo ciyaaro Minecraft ku saabsan MAC.
Habka ugu fiican ee aad Mirror Android inay MAC
Waxaa jira siyaabo kala duwan oo aad kaas oo muraayad kartaa qalab Android aad la leedahay Mac. Si kastaba ha ahaatee, ikhtiyaarka ugu fiican oo laga heli karo waa AirDroid. Iyada oo taageero ka AirDroid, waxaad si fudud u xakamayn kartaa qalab aad ku dhex ad Mac raaxaysan karaan waayo-aragnimada kala duwan oo xiiso leh.
Ku rakib AirDroid ku saabsan habka via https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sand.airdroid&hl=en
Calan u account AirDroid aad isu sharaxo codsiga.
AirDroid hadda ku weydiin doonaa inaad u suuragelinayo in ay adeeg. Tubada on sahlo loogu sidaas samaynaya. Ilaa Pop A ka muuqan doontaa hadda, kaliya ka jaftaa on OK inay ka adeegaan.
Sahlo Raadi My function Phone by it 'reebi iyo siyoodba on fursad u dhaqaajiso.
Goob kale oo menu Android ka muuqan doontaa qalab aad. Tubada ku dhaqaajiso iyo Mac iyo qalab hadda noqday doonaa socon in ay midba midka kale.
Hadda rakibi app AirDroid ee Mac iyo barnaamijka rakibo. Burcad file ka dib markii la rakibey waa dhameystiran yahay.
Ku qor login isku mid ah iyo password oo aad ku sameeyey aad app AirDroid in qalab aad.
Hadda waxaad ku ordi karo files ee qalab aad si fudud on your computer.
Sida loo Beddelaan TOD (M2T) faylasha loogu Mac (Yosemite ka mid ah)
> Resource > Mac > Full Guide on Mirroring Your Android in aad PC / Mac